Inona no olana tokony mitandrina ny tontonana rehefa PVC fametrahana?
1. Rehefa vita ny manda taila ny lakozia sy Wei no vita, dia afaka milaza ny mpanamboatra ny gusset lovia mba handrefy.
2. Electric rano heater \_ entona ny rano ao heater toerana. Ary ny jiro, setroka, sns Power tsipika voatokana.
3. Alohan'ny fametrahana ny valin-drihana, hividy ny trano fandroana setroka mpankafy (tsy mila fampidirana valin-drihana) \_ setroka Hood, ary ento any amin'ny toerana. Ny fanokafana ny setroka toerana lampblack sodina ny milina sy ny kabinetra mpanamboatra no nanapa-kevitra.
4. Ny valin-drihana jiro, raha nandinika lalina, dia tokony koa ho novidina ka nentiny ho any amin'ny toerana, izay amin'ny ankapobeny dia tsy ilaina.
5. Mba manamafy ny toerana misy ny fitaovana elektrika ny ambony fitaovana mba mpiasa ny fitaovana dia afaka manokatra ny lavaka.
6. Ny ambony sisin'ny ankamaroan'ny Windows ny lavarangana, lakozia sy ny fidiovana dia ambany noho ny haben'ny ny valin-drihana. Azafady manomana hazo fanampiny tontonana (na ny biraom-dakozia kabinetra) ka ny valin-drihana dia afaka installer sisin'ny faritra ireo.
Raha ny mombamomba ireo PVC valin-drihana no simba, dia tena mety ny hisolo azy. Raha mbola ianao hanala ny tie toeram amin'ny iray farany, esory ny lovia tsirairay avy ao amin'ny toeram tie, hanoloana ny simba amin'ny takelaka iray vaovao, ary avy eo indray hametraka azy sy tsindrio ny karavato bar. Rehefa fanoloana dia tokony hihaino tsara ny birao vaovao sy ny antitra loko birao tokony ho toy izany koa, tsy manana loko samy hafa.